musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Nyowani AC Hotel Atlanta Airport Gateway
nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
New AC Hotel naMarriott Atlanta Airport Gateway yakagadzirira vafambi
Nyowani AC Hotel Atlanta Airport Gateway iri kuzvimisikidza pachayo kumusika senzira inosarudzika yemufambi wanhasi ari kuchinja.
222-kamuri AC Hotel Atlanta Airport Gateway iri kuzvimisikidza pachayo kumusika.
New AC Hotel Atlanta Airport Gateway yakavhurwa muna Ndira 2020.
Vashanyi vemuhotera vanowana nekukurumidza kuGeorgia International Convention Center, Gateway Center Arena, uye zvimwe zvinokwezva padhuze uye zviitiko.
Sezvo traffic yevapfuuri inoenderera ichidzikisira zvine mwero pa Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, iyo nyowani AC Hotel Atlanta Airport Gateway iri kuzvimisikidza pachayo kumusika senge sarudzo inosarudzika yemufambi wanhasi ari kuchinja.
Inowanikwa matanho mashoma kubva kuAIRL SkyTrain yendege, iyo 222-kamuri AC Hotel Atlanta Airport Gateway yakavhurwa muna Ndira 2020. Iyo chivakwa inopa mukana usingaenzanisike kuAtlanta International, nhoroondo imwe yendege dzakabatikana kwazvo pasi rose.
Vashanyi vanonakidzwa nekuwana nekukurumidza kuenda kuGeorgia International Convention Center, Gateway Center Arena, uye zvimwe zvinokwezva padhuze uye zviitiko.
"Chikwata chedu chakanyatsodzidziswa chakagadzirira kugamuchira vafambi vanodzoka kuzonakidzwa nekugamuchira vaenzi vepasi rose uye zvinhu zvakanaka zvekugara zvakanaka, kusingakanganwike pahotera itsva iyi yakanaka," akadaro Jeff Fowler, maneja mukuru.
"Muchidimbu chose, AC Hotel Atlanta Airport Gateway inoburitsa hunyanzvi hwazvino uye dhizaini dhizaini iyo inozivikanwa naMAC brand Marriott, nepo ichisanganisira vibe yemunharaunda uye mweya wedhorobha."